सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ- यौन क्षमता बढाउने औषधी आफ्नै घर वरपर निःशुल्क रुपमा पाइन्छ ! हेर्नुहोस् पूरा ! - Taja Khabar
सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ- यौन क्षमता बढाउने औषधी आफ्नै घर वरपर निःशुल्क रुपमा पाइन्छ ! हेर्नुहोस् पूरा !
आयुर्वेदमा सेक्ससँग जोडिएका बिभिन्न समस्याको उपचार सैकडौं वर्षदेखि हुदै आएको छ । रोमन सभ्यतामा पनि मसलाको प्रयोगबाट सेक्स क्षमता बढाउने गरेको पाइएको छ । ठूलो इलायची, इलायची, ल्वाङ्ग, दालचीनी र कालो मरिच जस्ता मसलाको सन्तुलित सेवनले सेक्सको शक्ति बढाउँछ । त्यसैले पनि यिनैको सुगन्धको प्रयोग धेरै एरोटिक परफ्यूम बनाउन प्रयोग हुन्छ ।एजेन्सी
अनसनरत निर्मला पन्तका बुवालाइ कस्ले खुवायाे विष ? भेटियाे यस्ताे डरलाग्दाे तथ्य ! सबैले १-१ शेयर गरौ !
वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना छ भने यी ६४ जना दलालबाट जोगिनुहोस् : नत्र जीवन बर्वाद बन्नेछ !
पेट घोच्ने, दुख्ने, कानबाट पिप आउने जस्ता विभिन्न रोगको एउटै उपचार हिङ [पढेर सेयर…
के तपाईले कफी पिउने गर्नुहुन्छ?? यदि पिउने गर्नुहुन्छ भने एकपटक अवस्य हेर्नुस
मुटु तथा क्यान्सर रोग निको पार्ने घरेलु ओखती : हरेकलाई लागुहुने, सबैको जानकारीका लागी…
कतै ग्यास्ट्रिक देखि छाला रोग, बाथ, युरिक एसिड जस्ता रोग पालेर त बस्नु भएको छैन ? यदि…